‘ब्वाइज कट काट्थेँ, साइकल कुदाउथेँ’ : बसुन्धरा भुसाल |
‘ब्वाइज कट काट्थेँ, साइकल कुदाउथेँ’ : बसुन्धरा भुसाल
7 July, 2017 | Sandeep Bhattarai | 1245 Views | comments
२००७ साल फागुन महिनाको शिव रात्रीमा काठमाडौं, क्षेत्रपाटीमा मेरो जन्म भयो । हाम्रो परिवार मध्यम वर्गीय हो । बुबा दरबारमा सरकारको ‘डिट्ढा हाकिम’ हुनुहुन्थ्यो । सिंहदरबार नजिकै रहेको डब्लु.बीएस स्कुलबाट नर्सरीदेखि ३ कक्षासम्म पढे ।
त्यसपछि लैनचौरमा रहेको कन्या हाई स्कुलमा कक्षा ८ सम्म पढेँ । कला क्षेत्रमा लागेकाले धेरै व्यस्त भइन्थ्यो । नेपाल युवक माध्यमिक विद्यालय, क्षेत्रपाटीबाट २०२६ सालमा एसएलसी दिए । आई.ए. चाँही आरआर कलेजमा भर्ना भएँ । तर, अध्ययन पूरा हुन पाएन ।
कलाकारितामा लाग्दा सिस्नो पानी लगाइयो
मेरो परिवार अलि कन्जरभेटिभ खालको थियो । कला क्षेत्रप्रति एकदम ‘कन्जरभेटिभ’ सोच राख्नु हुन्थ्यो । कलाकारिता, नाँचगानमा लागे पछि ‘छोरी बिग्री पो हाल्छे कि ?’ भनेर सोच्नुहुन्थ्यो । कलाकारितामा लाग्दा धेरै ‘टर्चर’ पनि पाएकी थिएँ । धेरै पिटाई पनि खाएकी थिएँ । घरमा सिस्नो पानी लाउँथे, पिट्थे । बेलुका कार्यक्रमबाट आउँदा ढोकै खोल्दैन्थे । एकपटक राती कार्यक्रम सकेर नौ बजे घर आएँ । ढोका ढकढकाएँ । माथिबाट एक गाग्र्री चिसो पानी खन्याइदिएर निथ्रुक्कै हुँदा त्यो रात बेस्सरी रोएकी थिएँ ।
मलाई कलाकारिता किन नराम्रो भन्ने लाग्थ्यो । बाहिर कलाकारिता क्षेत्रको जसरी बदनाम गरिन्थ्यो त्यस्तो थिएन । नायिकालाई जस्तो सोचिन्थ्यो, त्यस्तो थिएन र म त्यस्तोमा परिन पनि । त्यति खेर त महिला डाक्टर बन्दा पनि आइमाई डाक्टर बनी भन्थे । कलाकार बन्दा पनि ‘आईमाई कलाकार’ भनेर हेप्थे । त्यसमाथि मेरो जोक गर्ने भूमिका थियो । ‘हेर, स्वास्नी मान्छे भएर यस्तो गरी’ भन्थ्यो समाजले । जोकर्नी भई, लाज नभएकी भन्थे । राती घर पुर्याउन आउने दाईहरूलाई पनि ‘ब्वाई फ्रेन्ड’ भन्थे । केटा लिएर आई अब डिट्ढा साबकी छोरी बिग्रिई भन्थे ।
सानै हुँदा बिहान फुत्त भागेर जाने, दिनभर, नाँच्ने, गाउने रमाइलो गर्ने गर्थे । साँझ फर्कदा भने मुटुमा ढुंगा राखेजस्तो हुन्थ्यो । पछि उहाँहरूले जे भन्दा पनि मैले नमाने पछि ‘एउटा कुखुराको फुल फुट्यो’ भनेर पनि भन्नु भयो । बुबाले कहिले पनि स्वीकार गर्नु भएन । बुबाले त मेरो कुनै पनि नाटक, फिल्म नहेरी बित्नुभयो । त्यो सम्झदा साह्रै दुःख लाग्छ ।
मेरो आमालाई भने गीत मन पर्ने, नाँच पनि हेर्न मन लाग्ने । तर, आफ्नी छोरी नाँचेको भने मन नपराउने । मैले आमाको मुख लागेर गीत सुन्दै हिड्ने आफू चाँही असल हो त ? भन्थे ।
विवाह गरेपछि घरबाट एकदमै सपोर्ट भयो । जति यो क्षेत्रमा आउन सजिलो भयो त्यो विवाहपछि मात्रै हो । मेरो श्रीमान्ले धेरै सहयोग गर्नुभयो । पछि माइतीमा पनि गाली गर्न छोडे ।
केटाले बेनामे चिठी फ्याँक्थे, हामी डाइलग हान्थ्यौं
उ बेलामा केटाहरूसँग बस्दा, खेल्दा पनि नराम्रो रूपमा लिइन्थ्यो । नेपाल युवक विद्यालयमा आएपछि पनि केटी साथीहरू नै धेरै भए । कलाकातिरतामा लागेपछि सबैले चिन्न थाले । केटाहरूले बाटोमा पच्छ्याउने, जिस्काउने, फुत्त बेनामे चिठी फ्याँक्थे । हामी पाँच÷६ जना केटी साथी मिलेर हेथ्र्यौं अनि हाँस्थ्यौं । अनि केटाहरूलाई उनीहरूले चिठीमा लेखेको ‘डाइलग’ बोलेर जिस्काउँथ्यौं । हामीदेखि केटाहरू नै लजाएर भाग्थे ।
मलाई दार्जिलिङ्सम्मबाट प्रिय अभिनेत्री ‘ए रात्तै’ भनेर चिठी आउथ्यो । त्यो प्रेम पत्र नभएर कलाकारलाई गरेको मायाको रूपमा थियो । बाटोमा केटाहरूले ए ! रात्तै भन्थे । ‘हिजो आज के भयो ए रातै तिम्रै माया लाग्छ’ भनेर केटाहरूले बाटो छेकेर गीत गाँउथे । केटाहरूले जिस्काउने भएकाले त्रिचन्द्र कलेजको बाटो हिड्न नै मुस्किल हुन्थ्यो ।
पुलिस क्लवमा नाँच्दा लभ
मेरो २०२४ सालमा १६ बर्षको उमेरमै बिहे भयो । उहाँ (श्रीमान्) प्रहरीमा सव–इनिस्पेक्टर हुनुहुन्थ्यो । पुलिस क्लवमा महेन्द्र राजाको जन्मोत्सव मानाइन्थ्यो । राष्ट्रिय नाँचघरबाट हामी अतिथि कलाकारको रूपमा त्यहाँ नाँच्न जान्थ्यौं । उहाँ केटाको तफबार्ट नाच्नुहुन्थ्यो । सँगै नाच्न थालेपछि नै मैले उहाँलाई चिनेको । उहाँ एकदम भद्र जस्तो लाग्थ्यो । उहाँले पनि मलाई मन पराउनु भएको रहेछ । पुलिस क्लवमा प्रहरी भित्र पनि ‘बसुन्धरा र चेतनारायण भुसाल सापको लभ परेको छ’ भनेर हल्ला चल्न थाल्यो । त्यो बेला डिबी लामा प्रहरीको आइजीपी हुनुहुन्थ्यो । उहाँलाई मैले धर्म दाई बनाएकी थिएँ । उहाँले नै बिहे गराइदिनु भएको हो । अहिले मेरो दुईवटा छोरी, एउटा छोरा छ ।
जरसाबले फुच्ची ठानेछन्
मेलै पहिलो पटक अभिनय गरेको ‘आमा’ फिल्मका पहिलो ‘सो’ आर्फी डेडक्वाटरमा भएको थियो । राजा महेन्द्र शाहबाट उद्घाटनका क्रममा रिबन काट्दा म च्याप्प समात्न गएछु । आर्मीका जरसावले ‘ए नानु धेरै चकचक गर्नुहुन्न’, भने । उनले मलाई फुच्ची ठानेछन् । फिल्म हेरे पछि ‘ए ! रात्तै यो नानी त त्यस्तो चंखु पो रहेछ’ भनेर भने । फिल्ममा पहिलो पटक सरर… पर्दामा हेर्दा आपूm ठूलै मान्छे भए जस्तो अनुभव भयो ।
ब्वाईज कट काट्थे, साइकल कुदाउँथे
अलिकति नक्कली र अलिकति स्मार्ट नै थिएँ । कपाल ब्वाईज कट हुन्थ्यो । क्रिम लगाएर हिंड्थे । मेड्डी लगाएर हिंड्थे । टमहरू लगाएर हिंड्थे । साइकल चालएर हिंड्थे । त्यो बेलामा साइकल राम्रोसँग चलाउन आउथ्यो । केटाहरूले धेरै पटक साइकलबाट लडाउन खोज्थे तै पनि मैले उनीहरूको साइकलसँग साइकल जुधाएर जितेकी छु । मलाई ‘नानी–बाबु’ भन्थे । म कलाकार नभएको भए खेलाडी हुँन्थे । स्कुलमा दौंड, कवड्डी, व्याडमिन्टनलगायतका खेल पनि राम्रै खेल्थे । म अलिकति चिनिएको, स्मार्ट भएकाले केटाहरूले खुव जिस्काउथे । हाम्रो ग्रुप नै स्मार्ट थियो । उनीहरू पढाईमा अब्बल थिएँ । म अतिरिक्त क्रियाकलापमा अब्बल थिएँ । पढाईमामा कमजोर पनि होइन, अब्बल पनि होइन । यद्यपि मैले स्कुलमा विज्ञान बिषय लिएरै एसएलसी पास गरेकी हुँ ।
पहिलो धेरै भएँ
मैले नेपालै बनाएको पहिलो फिल्म ‘आमा’बाट चलचित्र क्षेत्रमा अभिनय सुरु गरँे । २०२१ मा छायाँङ्कन भएको यो फिल्म २०२२ सालमा लागेको थियो । त्यसमा मैले बालकलाकारको रूपमा ‘ए रात्तै’ भनेर खेलेकी थिएँ । २०२३ सालमा दोस्रो फिल्म ‘हिजो, आज र भोली’मा अभिनय गरेकी थिएँ । बीष बर्ष राष्ट्रिय नाँचघरमा जागिर पनि खाए । तीन बर्ष प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा पनि जागिर गरे । कलाकार संघमा पाँच बर्ष उपाध्यक्ष, पाँच बर्ष अध्यक्ष भए । अहिले सल्लाहकार छु । विकास बोर्डमा पनि पहिलो महिला सदस्य भएँ । जीवनमा पहिलोमा धेरै परेकी छु । म अलि क्रान्तिकारी स्वभावकी छु । कसैले कसैलाई दवाएको सहन सक्दैन्थे । कलाकार संघमा लामो समय टिकेरै बसे । कलाकार संघको चुनावमा मन्त्री नै मलाई हराउन लागेका थिएँ । तर, चुनाव मैले नै जिते ।
आमाको साढीलाई स्टेजको पर्दा बनाउँथे
कलाकारितामा मेरो बच्चैदेखिको सोख हो । बच्चादेखि नै ‘एक्टिङ’ गर्ने, अरुलाई तर्साएर हिंड्ने गर्थे । २०१४ सालमा पहिलो पटक रंगमञ्चमा आएँ । त्यो बेलमा म ७ बर्षकी मात्रै थिएँ । स्कुलको नृत्य कार्यक्रममा सानैदेखि भाग लिन्थेँ । फिल्मका ‘डाइलग’हरू बोल्ने । नाटक हेर्न जाँदा स्टेजमा बिस्तारै पर्दा खुलेको देख्थे । त्यो दिमागमा बसेको हुन्थ्यो । घरमै आमाको साढीलाई पर्दा बनाएर साथीलाई समात्न लाउँथे र आफै गीत गाएर नाँच्थे । ‘हात काट्यो बरै चालिसे चुराले’ भनेर गीत गाउँथे । तत्कालीन जनसेवा हलामा आयोजना भएको बाल नृत्य प्रतियोगीतमा पनि त्यही गीत गाएर पहिलो स्टेज नृत्य पनि गरेर दोस्रो पनि भएकी थिएँ ।
मैले कलाक्षेत्रमा मान्नु पर्ने नाम हो भुवन चन्द । रंगमञ्चमा चाँही मेरो आफ्नै माइली दिदीको कारणले आएको हो । उहाँ नै प्रेरणाको स्रोत हो । अहिले फिल्म खेलेको पनि ५२ बर्ष भयो । मलाई अरु भन्दा पनि टिपिकल नेपाली नृत्य गर्न मन पनि पर्छ, आउँछ पनि ।
तीन बर्ष जति बालकृष्ण समकी चेली भएर नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा नाटक अभिनय पनि सिकें। मैले खेलेको पहिलो नाटक ‘डोला मैया’ होे । कृष्णप्रसादले रिमालले निर्देशन गर्नुभएको नाटकमा नेपालकी पहिलो नायिका भुवन चन्दले हिरोइनको भूमिका खेल्नु भएको थियो ।
पैसा सिध्याउन न्युरोडमा फन्का लगाउथ्यौं
घरमा खाना लगाउन अभाव थिएन । त्यसैले पैसाको लोभमा खासै पनि भएन । त्यस बेला सरकार आफैले पनि फिल्म बनाउँथ्यो । ‘मनको बाँध’, ‘हिजो, आज र भोली’ जस्ता फिल्म सरकार आफैंले बनाएको थियो ।
फिल्ममा अभिनय गर्नेलाई पैसा पनि राम्रै दिन्थ्यो । अनियबाट आएको पैसाले उ बेला राम्रैसँग पुग्थ्यो । प्रज्ञाप्रतिष्ठानले पनि हामीलाई त्यो बेलामा लगभग एक सय ८५ रुपैयाँ तलब दिन्थ्यो । त्यो पैसा सिध्याउन हामीले न्युरोडमा धेरै फन्का लगाउथ्यौं । पैसा नै सिद्धिदैन्थ्यो । पछि आएर मात्रै माग पनि बढ्न थाल्यो । हरेक कुराको मूल्य पनि बढ्न थाल्यो । परिवार पनि बढ्दै गयो । पहिले धेरै कलाकार पनि थिएन । हाम्रो पालामा फिल्मका कथा राम्रा हुन्थे । पहिले ‘क्वान्टिटी’ भन्दा ‘क्वालीटी’वाला फिल्म धेरै बन्थे । तर, अहिले पनि कतिपय नयाँ पुस्ताले राम्रा –राम्रा फिल्म बनाएका छन् ।
प्रस्तुति : रामकुमार,नागरिक दैनिकबाट
#ब्वाइज कट काट्थेँ